Regelingen ama regelingen waa ay fadeexadi hal warbaahinta ugu awooda badan in isticmaalka a ka fikiri kartaa in arrintan la xiriira. Waa mid ka mid ah qaabab multimedia ugu fiican in waxaa taageera tiro badan oo ah qalab iyo sidoo kale waa in la ogaadaa in qaabka ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira oo la kaliya ma soo bandhigay in dadka isticmaala si files ee ku kaydsan yihiin in qalabka kale ee qaadanaya meel yar oo meel waxaa loo kaydiyaa habka ugu wanaagsan ee sidoo kale waa in la ogaadaa in sida ugu fiican yahay in uu kaydiyo faylasha qaab regelingen.
Qeybta 1: Waa maxay sababta loogu badalo mts / m2ts in regelingen
Qeybta 2: Sida loo badalo mts / m2ts in regelingen fudud oo degdeg ah oo ku saabsan daaqadaha
Qeybta 3: Waa maxay regelingen
Waxaa jira sababo dhowr ah si loo hubiyo in qaabab ka jeesan ka mts iyo m2ts in regelingen oo waxaa la samayn karaa si fudud oo ku qanacsan isticmaalaha. Sidaas awgeed waa muhiim in la ogaado in user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in faa'iidooyinka qaab regelingen yihiin oo keliya ma akhriyaan laakiin fahamsan yahay si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira. Kuwa soo socda waa laba sababood oo keeni lahaa user ku wajahan suurto gal qaab sida qaabka regelingen ugu wanaagsan ee arrintan la xiriira:
The files m2ts qaadan meel aad u badan iyo kuwo aad u waaweyn oo cabbirka. In kastoo tayada waa xiddig laakiin arrinta meel guud ahaan waa wax siinayaa user madax xanuun iyo in uu marna doonayo inuu arrintan galay. Qaab regelingen ayaa sidaas daraaddeed seenyada loo bedelay oo user hadda sida qaabka qaadataa meel fog ka yar sida marka la barbar dhigo qaab mts ama m2ts hubin karaa in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin arrintan la xiriira. Qaabab waxa kale oo load nidaamka la kordhiyo iyo sabab la mid ah sidoo kale waa in la ogaadaa in waxa ugu fiican in la siiyo user ee arrintan la xiriira ay hubiyaan in qaab regelingen la soo xulay.
Taageerada software qaab regelingen waa xiddig iyo daaqadaha + IBM iskaashi ayaa lagu xaqiijiyey in taageerada software ah la siiyo habka ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in kordhinta file waxaa loo isticmaalaa ku dhawaad ​​80% dadka isticmaala oo dunida ah sida daaqadaha waa OS default waayo, qaar badan oo ka mid ah dadka dunida oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xuso in qaab regelingen waxaa si fudud ku kaydsan iyo wareejiyo aan arin kasta oo ay tahay mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu fiican ee la isticmaalayo qaab this taasoo keeni lahayd bulshada dhexdeeda iyo waxa uu door weyn ku sameeyo wixii kaloo ah.
Geedi socodka waa ay fududahay in la raaco oo lagu Xusi, sida soo socota si aad u hesho natiijooyinka ugu fiican u isticmaala ee arrintan la xiriira:
1. URL ayaa http://www.wondershare.com/guide/video-converter-ultimate.html waa in ay soo booqdaan si ay u hubiyaan in barnaamijka la bilaabay ka dib markii la rakibey:
2. qaab ah in ay tahay in la badaley waxaa ku raran adigoo gujinaya button files add ee interface ugu weyn:
3. Laga bilaabo guddi saxda ah qaab la markaas laga doortaa,
4. button diinta waa in la sii adkeeyey si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab wanaagsan ee arrintan la xiriira:
Regelingen u taagan tahay qaabka File Waveform Audio iyo foomka regelingen waxaa loo isticmaalaa in la hubiyo in loo kordhiyo file waxaa matalaya. Waxaa la soo saaro oo ay iskaashanayaan ee IBM iyo Microsoft oo sabab la mid ah, waa in la ogaadaa in qaab regelingen ah waxaa taageera oo dhan mashiinada ama qalabka Xararad in lagu horumariyo by shirkadaha kor ku xusan. Qaab Tani waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in la hubiyo in geeyo nool internet-ka waxaa sidoo kale lagu keydiyaa qaab this fudayd iyo qanacsanaanta. Regelingen sidoo kale waa mid ka mid ah qaabab kale in kasta oo madal ay taageertaa kuwa oo ka mid ah daaqadaha, Mac iyo Linux iyo saddexdan Waxaa halkan ku xusan sida ay yihiin mid ka mid ah ugu wanaagsan iyo qaabab ugu caansan ee jeer oo dhan. Waxaa sidoo kale in la xusay in waxa la arkaa in ay tahay qaabka ugu wanaagsan ee ay dadka isticmaala iyo sabab la mid ah waxaa kale oo ay xaqiijinayaan in filayo user waxaa la kulmay. Sida a qaab Windows quduuska webigu ku yara audio aan si fudud oo kaliya lagu kaydiyaa nidaamka laakiin user sidoo kale hubin karaa in in geeyo nool in la sameeyo barnaamij kasta oo kale waxaa sidoo kale lagu keydiyaa iyo Dhagaysteen ka dib qaab regelingen waana mid ka mid ah hababka ugu fiican si loo hubiyo in ugu fiican ayaa la siiyaa si user ah in arrintan la xiriira.
Qaab MKV ayaa sidoo kale wuxuu hubiyaa in meel bannaan oo ka yar waxa laga soo qaatay iyo waayo-aragnimo user la kulmay si ay u hubiyaan in dadka isticmaala ma aha oo kaliya in ka badan qaabka habka ugu fiican ee aad u hesho laakiin sidoo kale in la hubiyo in arrinta meel waxaa sidoo kale la xalin. Laga soo bilaabo 30 ilbiriqsi audio daqiiqadii on mts ama m2ts ah qaab qaadan kartaa ilaa 1GB meel bannaan laakiin si loo hubiyo in arrinta la xalin qaab regelingen loo isticmaalo si ay arrinta aan lagu xalin kaliya laakiin user sidoo kale helo natiijada in ay yihiin state of tahay in arrintan la xiriira. Regelingen sidoo kale waxay u taagan tahay WaveForm File Audio iyo waxa uu u adeegsanayaa qaab file hab khayraadka isku dhafan oo qaab bitstream si loo hubiyo in wixii kaloo la sameeyo hab ugu fiican. Waxaa sidoo kale in la xuso in user ay u baahan tahay si ay u hubiyaan in qaab regelingen waxaa si taxadar leh diinta iyo barnaamijka ugu wanaagsan ee loo isticmaalo in arrintan la xiriira. Marka ay timaado in tutorial this ka dibna waxa aad u muhiim ah in la ogaado in convertor ugu fiican ee la soo bandhigayaa, qaybtii dambe si loo hubiyo in user helo natiijada in ay yihiin state of tahay iyo waxa ay sidoo kale hubin doona in user marnaba u dhimeysa tayada. Dhab ahaantii isticmaalaya convertor this hubiyo in xaalada ayaa ah mid waligeed ka horimaanin by user ee arrintan la xiriira iyo sida ugu fiican ee la siiyaa user ee arrintan la xiriira sidii oo waa inuusan marna ha doonaa user tanaasul tayada iyo waa hubaal ka dhigi doonaa.
Sida loo rogo ama MTS in MOV ee Mac OS X Libaaxa / Windows
> Resource > Beddelaan > Sida loo badalo mts / m2ts in regelingen daaqadaha